Kwaphunywa Ezakhiweni Zingakapheli Izinsuku Ezingu-60
ULIMI ISpanishi Isi-Albania Isi-Amharic Isi-Arabhu Isi-Arabhu (SaseLebanon) Isi-Armenia Isi-Azerbaijani Isi-Azerbaijani (SesiCyrillic) Isi-Estonia Isi-Ewe Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Oromo Isi-Uighur (Sesi-Arabhu) Isi-Uighur (SesiCyrillic) Isi-Ukraine Isi-Urdu IsiBhunu IsiBislama IsiChewa IsiCreole SaseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanishi IsiDashi IsiFante IsiFinishi IsiFulentshi IsiGalicia IsiGeorgia IsiGreki IsiHiligaynon IsiHungary IsiJalimane IsiJapane IsiKabyle IsiKannada IsiKazakh IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiKrio IsiLatvia IsiLithuania IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMingrelia IsiNahuatl (SesiHuasteca) IsiNdebele (SaseZimbabwe) IsiNgisi IsiNorway IsiNtaliyane IsiPedi IsiPolishi IsiPutukezi IsiPutukezi (SasePortugal) IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbia (SesiRoma) IsiShayina SesiCanton (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiCanton (Sezinhlamvu Zakudala) IsiShayina SesiMandarin (Esenziwe Lula) IsiShayina SesiMandarin (Sezinhlamvu Zakudala) IsiSinhala IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwidi IsiTahiti IsiTajiki IsiTankarana IsiTarascan IsiTelugu IsiThai IsiTonga (SaseMalawi) IsiTotonac IsiTsonga IsiTswana IsiTurkey IsiTzeltal IsiTzotzil IsiValencia IsiVezo IsiVietnam IsiWallis IsiWelsh IsiXhosa IsiZulu
Kwaqedwa Zingakapheli Izinsuku Ezingu-60
NgoLwesihlanu, ngo-July 5, 2013, umkhaya waseBethel yase-United States wajabula kakhulu lapho u-Anthony Morris welungu leNdikimba Ebusayo enza lesi saziso: “Kwenziwe isivumelwano sokuba kudayiswe izakhiwo eziyisithupha ezise-117 Adams Street nase-90 Sands Street eBrooklyn. * Ukudayiswa kwezakhiwo ezinhlanu kudinga ukuba kuphunywe kuzo phakathi no-August kulo nyaka.”
Kwaba sobala ukuthi lona kuzoba umsebenzi omkhulu. Isiyonke indawo yalezi zakhiwo ezinhlanu ilingana nezinkundla zokudlala ibhola ezingu-11 ezisetshenziselwa imidlalo yamaqembu amazwe! Kwakufanele kuphunywe kulezo zakhiwo zingakapheli izinsuku ezingu-60!
Sekungamashumi eminyaka lezi zakhiwo ezinhlanu zisetshenziselwa ukunyatheliswa nokuhlanganiswa kwezincwadi kodwa ngo-2004 leyo mishini yathuthelwa eWallkill, eNew York.
Kusukela ngaleso sikhathi, lezo zakhiwo ziye zasetshenziselwa ukugcina nokulungisa izinto, zigcwele amathuluzi okwakha, ifenisha yasemahhovisi namathuluzi okwakha asetshenziswa e-United States nakwamanye amazwe.
Ukuze kuphunywe kulezi zakhiwo ngesikhathi esibekiwe, kwakudingeka kuhlelwe ngokucophelela. Okokuqala, kwenziwa uhlu lwezinto okufanele zidayiswe, zilahlwe noma zigcinwe. Okwesibili, kwahlelwa ukuba kuphothulwe umsebenzi ngokuphepha nangokushesha.
Umkhaya waseBethel wasebenza kanzima ukuze usekele lo msebenzi. Ngaphezu kwalokho, kwamenywa izisebenzi zokuzithandela zesikhashana ezingu-41 ukuba zizosiza eBethel. Izisebenzi zokuzithandela zeza zivela ezingxenyeni ezihlukahlukene ze-United States. Iningi lazo kwakuyizinsizwa eziyizingqabavu. Zamukela isimemo sokuyosiza isikhathi esingaba amasonto ayisithupha kuya kwayishumi, zishiya imindeni, abangane nemisebenzi yokuziphilisa ukuze ziyosebenza eBethel. Zazizwa kanjani ngalo msebenzi?
UJordan, oneminyaka engu-21 ubudala, owayevela eWashington State, wathi: “Ngifisa sengathi ngabe ngasheshe ngasifaka isicelo.”
USteven, waseTexas, oneminyaka engu-20, wathi: “Ngizizwa ngiyingxenye yomndeni omkhulu ojabulayo, osebenza ngokuzikhandla.”
UJustin oneminyaka engu-23, wabhala: “Ngizizwa ngisekhaya lapha eBethel. Kuyamangalisa ukuhlakanipha okukhulu okungokomoya, uthando nobuzalwane obulapha eBethel.”
U-Adler, oneminyaka engu-20, ovela ePuerto Rico, uthi: “Ukuvuka ekuseni ngovivi kuyinselele, kodwa ngikwazile ukwakha ubungane obuyohlala phakade.”
UWilliam, oneminyaka engu-21, uthi: “Ukuza eBethel bekulokhu kuyiphupho lami kusukela ngisemncane. Ngangicabanga ukuthi ngizoba nomzwangedwa kodwa akubanga njalo. Ukuba seBethel kube isikhathi esimnandi kunazo zonke ekuphileni kwami! Ayikho into engingayicabanga engcono kunokuba lapha.”
Ingabe iqembu lezisebenzi zokuzithandela laqeda ngesikhathi esimisiwe? Yebo, laqeda​—ngezinsuku ezingu-55.
^ par. 2 Esakhiweni esise-90 Sands Street kuzophunywa ngo-2017.
Ukuthutha E-117 Adams Street
Amalungu omkhaya waseBethel asho izinto azikhumbulayo ngomsebenzi obalulekile wokunyathelisa owenziwe kule ndawo edumile yaseBrooklyn.
Thumelela Thumelela Kwaqedwa Zingakapheli Izinsuku Ezingu-60